पार्टीबाट छुट्टिएर गएकाहरुले जनतालाई दुःख दिन आमहड्ताल गरेः प्रधानमन्त्री ओली (भिडियो रिपोर्टसहित) – Himalaya Television
२०७७ माघ २१ गते १९:०८
२१ माघ २०७७ काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भोलिका लागि प्रचण्ड नेपाल समूहले आह्वान गरेको आमहड्तालका सम्बन्धमा प्रतिक्रिया दिनुभएको छ । काठमाडौंमा आज आयोजित एक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले भोलिका लागि घोषित आमहडताल जनतालाई दुःख दिनका लागि गरिएको बताउनुभयो । पार्टीबाट छुट्टिएर गएकाहरुले जनतालाई दुःख दिन खोजेको उहाँको आरोप छ ।
भूमिहीन सुकुम्बासी संगठन केन्द्रीय कमिटीले काठमाडौंमा गरेको राष्ट्रिय भेलामा बोल्दै प्रधानमन्त्री ओलीले माधवकुमार नेपालले सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्ने सकारको प्रयासमा बाधा पुराएको आरोपसमेत लगाउनुभयो । माधव कुमार नेपाललाई भूमि व्यवस्था समाधान हुन नदिने नेताको संज्ञा दिदै उहाँले पार्टी छोडेर गएपछि मात्रै आयोगले काम गर्न थालेको दाबी गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो “अघिल्लो पटक म प्रधानमन्त्री हुँदा समस्या समाधान गर्न खोजियो । माधव नेपालले आफ्नो एउटा समर्थक वकिललाई लगाएर मुद्दा लगाएर लच्चिएको लच्चियै काम हुन पाएन । भूमि व्यवस्था समाधान हुन नदिने । एउटा हाजिरी जवाफ प्रतियोगिता जस्तो चलाइहालुँ । तपाईहरुलाई म सोध्छु । सुकुम्बासी समस्या समाधान हुन नदिने नेताहरुमध्येको मुख्य नेता को हो ? माधव नेपाल । बनेको आयोगलाई काम गर्न नदिएर एउटा नवलपरासीको सुकुम्बासी मानसिकताको वकिलले मुद्दा हालेर त्यो आयोगले काम गर्न पाएन । र यसपटक फेरि हामीले आयोग बनाउनुपर्‍यो । यो आयोग बनाउन थालेको लगभग ३ बर्ष भयो । पार्टी छोडेर माधव नेपाल ‘पाटी’तिर गएपछि बल्ल आयोग पुरा भयो ।”
प्रधानमन्त्री ओलीले माधव नेपाल, नारायणकाजी श्रेष्ठ र घनश्याम भुसालले सरकारलाई काम गर्न नदिएको भन्दै उहाँहरुलाई ‘छलफलवाला मान्छे’ को संज्ञा दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो“माधव नेपाल र नारायणकाजी भन्ने दुई जना मान्छे पार्टीमा थिए । तिनीहरु सबै छलफल हुनुपर्छ भन्ने । जतिबेला पनि छलफल हुनुपर्छ भन्ने । छलफलवाला मान्छे मैले नेपालमा भेटाएको ३ जना मान्छे । एउटा माधव नेपाल, अर्को नारायणकाजी श्रेष्ठ, अर्को घनश्याम भुसाल । जहिले जेमा पनि छलफल हुनुपर्छ । छलफल गर्नुपर्छ । सुकुम्बासी आयोग बनाऔ । छलफल गर्नुपर्छ । बनायो । किन बनाइयो ? छलफल हुनुपर्छ । पूर्णता दिउँ । छलफल हुनुपर्छ । प्रतिनिधि मागौ । होइन छलफल हुनुपर्छ । छलफलवाला मान्छेहरुले पार्टी छोडे पाटीतिर लागे । तिनीहरुको पाटीको बास हुन थालेपछि आयोग बन्यो । पूर्णता पाएको छ । काम बन्छ ।”
उहाँले पार्टीमा सुद्धीकरण आवश्यक रहेको र सुद्धीकरण आवश्यक रहेकाहरु आफै किनारा लागेको बताउनुभयो । पार्टी छोडेर पाटीमा गएकाहरुले आफ्नो अभिष्ट पुरा गर्न नेपाल बन्द गरेर जनतालाई दुख दिने काम गरेको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो “उनीहरु किन छटपटाएका छन् ? नेपाल बन्द रे ? जनताले के बिगारेको थियो र ? जनतालाई किन दुख दिनुपर्‍यो नेपाल बन्द गरेर ? पार्टी छोडेर आफुहरु पाटीमा लाग्छन् । अनि बन्द गरेर जनतालाई दुख दिने ? बन्द भन्या के ? हिडडुल गर्न नपाउने । बन्द भन्या के ? पसल खोल्न नपाउने । किन्न जान नपाउने । पढ्न जान नपाउने । बन्द भनेको जनतालाई दुख दिने । त्यो किन गर्नुपरेको छ ? के का लागि गर्नुपर्‍यो बन्द ? ”
आफुलाई कम्युनिष्ट र क्रान्तिकारी भन्नेहरु नै आफ्नै पार्टीलाई धुलो बनाएर अरुसंग घुँडा टेक्न पुगेको टिप्प्पणी प्रधानमन्त्रीले गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो “अस्ति माधवकुमार नेपाल शेरबहादुर देउवा जी कोमा गएका थिए । रामका अगाडि हनुमान घुँडा टेकेर बसे जसरी बसेका थिए । अब २ बर्षको प्रधानमन्त्री तपाई नै हो । तपाईलाई नै दिन्छौ । २ बर्षको प्रधानमन्त्री खानुहोस् । लेखेर दिन्छौ क्या लेखेर दिन्छौ । सही गरेर दिन्छौ । अनि क्रान्तिका गफ गरेछन् बाहिर निस्केर । कम्युनिष्ट पार्टी धुलो पार्न खोज्ने अनि अन्त गएर घुँडा टेकेर, प्रणाम गरेर, लिखित दिन्छौ भनेर, ल्याप्चे लगाएर क्रान्तिकारिताको गफ दिने ? उहाँहरु जे हो त्यही प्रकट हुँदैछ । जे हो त्यही देखिँदैछ । मखुण्डो खुइलियो । मौन भएको थियो मखुण्डो खुइलियो । ”
प्रधानमन्त्रीले शुक्रबारको सभामा आउन सबैलाई निम्तो पनि दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो “निम्ता गर्दा चु लेख्ने चलन हुन्छ नि । चुले निम्तो होइन । गा लेखेको छ । टो लेखेको छ । वा लेखेको छ । अथवा गावै निम्तो, टोलै निम्तो वडै निम्तो । त्यसै हिसाबले आउनुहोला । पर्सी हाम्रो भेट हुनेछ । बाँकी कुरा त्यही राख्ने छु ।”
केही मान्छेहरु सरकारलाई असफल बनाउन लागि परेपनि सरकार आफ्नो उद्देश्यमा कटिबद्ध रहेको स्पष्ट पार्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो “सरकार आफ्नो उद्देश्यमा फेल हुन तयार छैन । फेल गर्न त लाग्छन् केही मान्छेहरु । छलफल गर्नुपर्छ भन्ने मान्छेहरु । उनीहरुलाई कुरा फिट्नमा आनन्द छ । काम गर्न होइन । काम गर्न नदिने कुरा फिटेर बस्नुपर्छ । ”
उहाँले सुकुम्बासी समस्या समाधानको विषय मुलभूत विषय भएको भन्दै सरकार समस्या समाधान गर्ने काममा लागेको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले सम्पूर्ण नेपाली जनताको राष्ट्रिय आकांक्षा समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली रहेको र त्यो आकांक्षा पुरा गर्न सबै नेपाली सम्मृद्धि हुनुपर्ने र त्यसको हिस्सेदारी सबैले प्राप्त गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले सुख प्राप्तिका सबै मापदण्ड सबै नेपाली समक्ष पुगे मात्रै सबै नेपाली सुखी हुन सक्ने बताउनुभयो । हरेक व्यक्तिले सम्मानित, सुरक्षित र भयरहित जीवन बाँच्न पाउने अधिकार प्राप्त भए मात्रै सुखको अवस्था हुने भन्दै उहाँले सुकुम्बासी, भूमिहीन दलित, कमैयालगायतका समस्याको समाधान नभईकन सरकारको उद्देश्य पुरा नहुने भएकाले सबै प्रकारका गरिबी हटाउने प्रयासमा सरकार लागेको स्पष्ट पार्नुभयो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले अव्यवस्थित बसोबास, सुकुम्बासी समस्या लगायतका समस्या समाधान गर्न भूमि व्यवस्था आयोग निर्माण गरेको र त्यो आयोगले देशव्यापी रुपमा पूर्णता पनि पाइसकेकाले छिटै भूमि सम्बन्धी समस्याको अन्त्य हुने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।
आमहड्ताल ओली जनता पार्टी प्रधानमन्त्री